Nnukwu oghere igwe ego na-emeri @ Graton German Online cha cha | NorCal oghere Guy
Buffalo Gold 1c igwe na ego 120
Denye aha m nke abụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ vidiyo na-abụghị oghere:
Nwere olileanya na ị ga-enweta vidiyo ahụ! Y’oburu n’ichoro m uzo, ziga m na instagram !!!
BMy Kachasị BUFFALO ọlaedo jaket (10K + mmeri):
Ọ bụrụ na ihe nkiri vidio m masịrị gị, hapụnụ ka ị denye aha iji hụkwuo.
M na-edekarị na nyocha Instagram m banyere mmeri igwe m, na-enwe izu ole na ole tupu vidiyo igwe oghere na-apụta na youtube. So so m na Instagram, ka m zoro ezo onu ogugu ugha nke egwuregwu n'ọdịnihu!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ izipu akwụkwọ ozi ma ọ bụ postkaadị ọ bụla:
NorCal oghere Guy
Fremont, Nkea 94539
Ebumnuche nke ọwa a abụghị iji kpọsaa ma ọ bụ kwalite ịgba chaa chaa kama iji nwee obi ụtọ nke mmeri igwe, jackpots na mgbakwunye na bonuses!
Upload Nbudata niile bụ ihe ọgụgụ isi nke NorCal Slot Guy. Nweghị ikike iji bipụta ma ọ bụ jiri akụkụ ọ bụla nke ha ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwado ederede m.